Coronavirus Eswatini Latest Figures - Deaths, Active and Recoveries
Coronavirus Tracker for Eswatini
A summary of today's Coronavirus cases in Eswatini and a daily list of all the Coronavirus cases recorded in Eswatini.
A list of all previously recorded Coronavirus cases in Eswatini by date.
Coronavirus cases in Eswatini
Here is a list of the Coronavirus figures for Eswatini ordered by date.
In Eswatini on 10 July 2020 there have been 44 new cases, 1 deaths and 24 recoveries.
In Eswatini on 9 July 2020 there have been 75 new cases, 3 deaths and 21 recoveries.
In Eswatini on 8 July 2020 there have been 82 new cases, 0 deaths and 18 recoveries.
In Eswatini on 7 July 2020 there have been 45 new cases, 1 deaths and 6 recoveries.
In Eswatini on 6 July 2020 there have been 23 new cases, 0 deaths and 17 recoveries.
In Eswatini on 5 July 2020 there have been 34 new cases, 0 deaths and 12 recoveries.
In Eswatini on 4 July 2020 there have been 45 new cases, 0 deaths and 20 recoveries.
In Eswatini on 3 July 2020 there have been 36 new cases, 2 deaths and 63 recoveries.
In Eswatini on 2 July 2020 there have been 33 new cases, 0 deaths and 34 recoveries.
In Eswatini on 1 July 2020 there have been 28 new cases, 0 deaths and 10 recoveries.
In Eswatini on 30 June 2020 there have been 17 new cases, 0 deaths and 28 recoveries.
In Eswatini on 29 June 2020 there have been 14 new cases, 0 deaths and 8 recoveries.
In Eswatini on 28 June 2020 there have been 36 new cases, 3 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 27 June 2020 there have been 17 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 26 June 2020 there have been 22 new cases, 0 deaths and 20 recoveries.
In Eswatini on 25 June 2020 there have been 16 new cases, 1 deaths and 16 recoveries.
In Eswatini on 24 June 2020 there have been 16 new cases, 0 deaths and 12 recoveries.
In Eswatini on 23 June 2020 there have been 31 new cases, 1 deaths and 28 recoveries.
In Eswatini on 22 June 2020 there have been 8 new cases, 1 deaths and 6 recoveries.
In Eswatini on 21 June 2020 there have been 8 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 20 June 2020 there have been 4 new cases, 1 deaths and 9 recoveries.
In Eswatini on 19 June 2020 there have been 37 new cases, 0 deaths and 9 recoveries.
In Eswatini on 18 June 2020 there have been 23 new cases, 0 deaths and 5 recoveries.
In Eswatini on 17 June 2020 there have been 43 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 16 June 2020 there have been 14 new cases, 0 deaths and 10 recoveries.
In Eswatini on 15 June 2020 there have been 16 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 14 June 2020 there have been 4 new cases, 1 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 13 June 2020 there have been 14 new cases, 0 deaths and 1 recoveries.
In Eswatini on 12 June 2020 there have been 23 new cases, 0 deaths and 8 recoveries.
In Eswatini on 11 June 2020 there have been 51 new cases, 0 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 10 June 2020 there have been 27 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 9 June 2020 there have been 31 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 8 June 2020 there have been 7 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 7 June 2020 there have been 28 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 5 June 2020 there have been 5 new cases, 0 deaths and 20 recoveries.
In Eswatini on 4 June 2020 there have been 5 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 3 June 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 2 June 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 1 June 2020 there have been 8 new cases, 1 deaths and 5 recoveries.
In Eswatini on 31 May 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 21 recoveries.
In Eswatini on 30 May 2020 there have been 4 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 29 May 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 28 May 2020 there have been 7 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 27 May 2020 there have been 11 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 26 May 2020 there have been 5 new cases, 0 deaths and 6 recoveries.
In Eswatini on 25 May 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 24 May 2020 there have been 12 new cases, 0 deaths and 37 recoveries.
In Eswatini on 23 May 2020 there have been 13 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 22 May 2020 there have been 5 new cases, 0 deaths and 7 recoveries.
In Eswatini on 21 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 15 recoveries.
In Eswatini on 20 May 2020 there have been 9 new cases, 0 deaths and 10 recoveries.
In Eswatini on 19 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 9 recoveries.
In Eswatini on 18 May 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 5 recoveries.
In Eswatini on 17 May 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 1 recoveries.
In Eswatini on 16 May 2020 there have been 12 new cases, 0 deaths and 6 recoveries.
In Eswatini on 15 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 15 recoveries.
In Eswatini on 14 May 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 13 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 20 recoveries.
In Eswatini on 12 May 2020 there have been 9 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 11 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 1 recoveries.
In Eswatini on 10 May 2020 there have been 9 new cases, 0 deaths and 13 recoveries.
In Eswatini on 9 May 2020 there have been 4 new cases, 0 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 8 May 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 7 May 2020 there have been 30 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 6 May 2020 there have been 4 new cases, 1 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 5 May 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 4 May 2020 there have been 4 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 3 May 2020 there have been 4 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 2 May 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 1 May 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 30 April 2020 there have been 9 new cases, 0 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 29 April 2020 there have been 20 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 28 April 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 27 April 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 26 April 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 25 April 2020 there have been 20 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 24 April 2020 there have been 5 new cases, 0 deaths and 2 recoveries.
In Eswatini on 23 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 22 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 21 April 2020 there have been 7 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 20 April 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 19 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 18 April 2020 there have been 6 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 17 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 16 April 2020 there have been 1 new cases, 1 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 15 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 14 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 1 recoveries.
In Eswatini on 13 April 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 12 April 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 11 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 10 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 9 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 8 April 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 3 recoveries.
In Eswatini on 7 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 6 April 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 4 recoveries.
In Eswatini on 5 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 4 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 3 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 2 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 1 April 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 31 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 30 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 29 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 28 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 27 March 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 26 March 2020 there have been 2 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 25 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 24 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 23 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 22 March 2020 there have been 3 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 21 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 20 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 19 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 18 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 17 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 16 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 15 March 2020 there have been 0 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
In Eswatini on 14 March 2020 there have been 1 new cases, 0 deaths and 0 recoveries.
Summary of Coronavirus cases in Eswatini
The total amount of cases today 14 March 2020 in Eswatini is 1,257.
The coronavirus figures and stats for Eswatini are provided by John Hopkins and World Health Organization and are updated daily.
In light of this current coronavirus pandemic it is important that you follow the procedures and rules set out by the governing body in Eswatini this will help slow the spread and drastically reduce risk of the virus spreading further.